आमालाई भावुक स्टाटस लेख्दै पोर्चुगलमा गरे बझाङका युवकले आत्महत्या ! « MNTVONLINE.COM
आमालाई भावुक स्टाटस लेख्दै पोर्चुगलमा गरे बझाङका युवकले आत्महत्या !
काठमाडौँ । पोर्चुगलको राजधानी लिस्बानमा एक नेपाली युवकले हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । सुदुरपश्चिम बझाङ स्थायी घर भएका २७ वर्षीय दिनेशकुमार कुँवरले पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आफू बसेको होस्टेलबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् ।